अन्ततः खुशिको खबर रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/अन्ततः खुशिको खबर रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित !
हाल रुसलगायत देशमा ४० हजार नागरिकमा भ्याक्सिनको तेस्रो चरण अर्थात् थर्ड ट्रायल भइरहेको छ । सो सफल भए आगामी माघसम्म नेपालमा भ्याक्सिन ल्याइने ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘४० हजार नागरिकमा खोप परीक्षण सफल भए औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गर्छौं । यदि सबै प्रक्रिया पूरा हुँदै गए आगामी माघसम्म नेपालमा भ्याक्सिन आइपुग्छ ।’